वैशाखमै यो हाल छ, जेठको प्रचण्ड घाममा के होला ? - Meronews
वैशाखमै यो हाल छ, जेठको प्रचण्ड घाममा के होला ?
मेरोन्यूज २०७८ वैशाख ७ गते १३:१२
काठमाडौं । ‘लाग्दो वैशाखमै यो हाल छ, जेठको प्रचण्ड घाममा के होला ?’ खानेपानीको धाराबाट पानी झर्न छाडेपछि दिक्क हुँदै महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका-२ बुद्धचोककी गृहिणी गायत्री आचार्यले भनिन्, ‘खै यसपालि त निको चाल छैन।’
‘हेर्नुस् न, जताततै ढकमक्क कमल फुलेका तलाउ हेर्दाहेर्दै सुके, अहिले त कमल फुल्ने तलाउमा कमिला पो हिँड्न थाले’, बर्दिवास(४ माईस्थानस्थित पञ्चधुरामाई मन्दिर परिसरका खरमट्ट सुकेका तलाउका खाल्डा देखाउँदै त्यहीँकै बासिन्दा सोम कार्कीले भने, ‘चैत मध्यपछि पानीका मुहान सुक्दै गएका हुन्।’
नयाँ वर्ष २०७८ सुरू भएयता इनार, चापाकल सुक्ने क्रम बाक्लिएको छ।
रातु नदी र खोल्साखोल्सीको पानी संग्रह गरेर धाराबाट पानी वितरण गरिँदै आइएका बस्तीमा मुहान नै सुकेपछि धारामा पानी आउन कम हुँदै गएको हो।
बर्दिवास वरिपरिका खोल्सीबाटै खानेपानीको धारा व्यवस्थापन गर्दै आइएका बस्तीमा धाराबाट पानी झर्न छाडेर टुटीमा खिया लाग्दै गएको बर्दिवास(१२ बिजलपुरा–२ की बासिन्दा राजनीतिककर्मी प्रतीमा कोइरालाले बताइन्।
प्राकृतिक कारणले पानी नपर्नु र पानीका स्रोतका मुहान सुक्दै गएसँगै तिनको मर्मतसम्भार र नयाँ इनार निर्माणका काम अघि बढाइएको भङ्गाहाका नगरप्रमुख सञ्जीवकुमार साहले बताए।
चुरे र जलाधार क्षेत्र विज्ञले भने पुराना इनार मर्मत र नयाँ निर्माण गरेर मात्र यो समस्या नटर्ने बताएका छन्।